Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Boqolaal Dhalinyaro reer Hargeysa ah oo gaalowday diinta islaamkana ka baxday!
Boqolaal Dhalinyaro reer Hargeysa ah oo gaalowday diinta islaamkana ka baxday!
Jul 14, 2016 SOMALI NEWS 0
Hargeysa(Harowo)–Dhacdo layaable oo naxdin badan ayaa laga dareemey gudaha magaalada Hargeysa,Waxaa magaalada hargeysa lagu arkey tiro dhallinyaro oo kabaxay diinta islaamka,kuwaasi oo la sheegey inay qaateen diinta KIRISTAANKA,tirada dhallinyaradan ayaa lagu sheegey boqol iyo dheeraad isugu jira wiilal iyo gabdho.Dhallinayaradan ayaa sida la sheegey ku noolaa xaafadda 26-ka June ee magaalada Hargeysa.
Dhallinayradan ayaa waxaa lacag ku bixinayey inay diinta islaamka ka baxaan nin iyo naag caddaan ah oo ka soo jeeda assal ahaan dalka Denmark,waxaana ay u kireeyeen aqallo ku yaalla xaafadaha 150-ka iyo Jig-jiga yar iyada oo sida la sheegey loo iibiyey gawaadhi qaaliya oo kala duwan.
Dadka xaafada degenaa ee dhalinyaradani joogeen ayaa u xaqiijiyey inay dhallinyaradaasi ay qaateen diinta KIRISTAANKA isla markaan ay lacag siin jireen laba qof oo Danish ah. Waxaana ay wararku sheegayaan in dhallinyaradani ay jidkoodu ku dul qoreen astaanka kiristaanka ee karooska loo yaqaano ama baatuunka.
Ciidamada CID-da Somaliland oo baadhitaanno kala duwan ku hayey iyo dabagal dheer dhalinayradan ayaa sida la sheegay hawlgal iyo dabagal ay ku hayeen dhallinyaradaasi ka baxdey diinta ISLAAMKA, xilli ay dhallinyaradani marayeen xaafadda 150-ka ee magaalada Hargeysa ayaa mid ka mid ah dhallinyaradu uu baastoolad ula soo baxay ciidankii booliska ee daba galka ku hayey,kaddibna askari ka mid ahaa ciidankii daba galka ku hayey ayaa kaga horreeyey xabbada oo dhaawacey ninkii dhallinyaradan ahaa.
Waalidiinta dhallinyaradan ee dhaley hablaha iyo wiilasha ee ka baxay diinta islaamka ayaa faraha ka qaadey ubadkoodan diinta islaamka ka baxay. Wiilka dhaawaca ah ayaa lagu daaweynayaa cisbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa.
Ma jirto cid ka hadashey oo ka tirsan mas’uuliyiinta dawladda dhacdadaasi,waxaana socda baadhitaanno iyo su’aalo la weydiinayo dhallinyarada intii gacanta lagu dhigey.
Denmark, hargeysa, ISLAAMKA, KIRISTAANKA
R/Wasarihii Cusbayd ee Ingiriiska oo Nidaamku ka lumay markii ay kasoo baxday albaabka madaxtooyada baabuurkeediina garanwayday Magaalo ku taal dhulka hoostiisa oo quruumo hore deganaayeen oo loo bixiyay magaaladii Jinka
Xog:- Ethiopia oo Kaniisad ka Furaneyso Gudaha Magaalada Hargeysa Si Kiristanka...
Hargeysa oo Laga Xusay Isra Walmicraaj + Borama oo Labo Sano aan Laga Soo Hadal...
Gudoomiyaha Xisbiga WADANI Oo Si Diiran Loogu Soo Dhaweeyey Caasimada Dalka...